Iindaba -Izibonelelo ezithandathu kunye nezizathu zokuqalisa ukutya ibhotolo yamandongomane
Izibonelelo ezithandathu kunye nezizathu zokuqalisa ukutya ibhotolo yamandongomane
Okona kusasazeka kwamantongomane kuya kuthi ngokuqinisekileyo kuzise utshintsho olululo kwindlela otya ngayo yibhotolo yamandongomane. Yenziwe ngamandongomane omisiweyo kunye nosiweyo kwaye ihlala ifakwa kwiqela lokutya okusempilweni. Izele zizondlo eziluncedo kwimpilo yakho okoko nje ukonwabela ukumodareyitha. Inamalungu amaninzi ezempilo ongenakuze wazi!
1. Ukuphucula iMisipha kunye neMithambo yezeMpilo
I-Magnesium sisondlo esibalulekileyo esilawula amakhulu eempendulo zamachiza emzimbeni, ibhotolo yamandongomane ingumthombo ofanelekileyo kuyo. Iqukethe malunga ne-12% yemagniziyam yokutya okucetyiswayo kwemihla ngemihla. Oko kuthetha ukuba iicephe ezi-2 kuphela zale bhotolo imnandi inokuyiphucula impilo yakho. Inokukunceda ekugcineni inkqubo ye-nervous esempilweni, amathambo kunye namazinyo omeleleyo, iqondo lobushushu lomzimba eliqhelekileyo, kunye namanqanaba aphezulu emandla. Ngaphandle koko, ibhotolo yamandongomane inokuwaphucula amanqanaba akho e-serotonin aya kukhokelela ekulaleni ngcono.
2. Ukunciphisa umngcipheko wokufa ngaphambi kwexesha
Izifundo zibonise ukuba ukunikezelwa kwamandongomane kwimihla ngemihla kuyasebenza ekunciphiseni umngcipheko wezizathu ezininzi zokufa, ngakumbi ukufa kwentliziyo. Ziqulathe amafutha e-polyunsaturated atyebile kwii-antioxidants eziluncedo kwimpilo yentliziyo. Ezi zinto zinokunciphisa uxinzelelo lwegazi kunye nokuziqhelanisa.
3. kuqheleke kumanqanaba oxinzelelo
Izifundo zibonise ukuba ukutya okunotyebileyo kumanqatha afana nebhotolo yamandongomane kune-beta-sitosterol enokunceda ukuthoba amanqanaba e-cortisol, ihomoni ekhutshwa xa uphantsi koxinzelelo. Ngamanye amaxesha unokuziva unomdla wokubamba i-snack ephezulu kumafutha omzimba ukulungelelanisa amanqanaba e-cortisol. Kwezo meko, ibhotolo yamandongomane iya kuba lukhetho olufanelekileyo. Amanqanaba aphezulu amanqatha aphilileyo aluncedo ekomelezeni amajoni omzimba.
4. Ukunyusa amaNqanaba oMbane
Ibhotolo yamandongomane yenye yezo zokutya zinokunyusa amandla akho kuba iyiprotein enye indlela. Ezo proteni kunye nefayibha ayisiyomithombo yamandla eyoyikekayo kuphela, kodwa ziyanceda ekulinganiseni amanqanaba eswekile yegazi lakho.
5. Ukulwa Ukutyeba
Nangona ibhotolo yamandongomane inamafutha amaninzi, aqulathe neekhalori ezili-100 kwitispuni enye, uphononongo lubonakalisile ukuba lunokukunceda nasekunciphiseni ubunzima. Ukutya okuqulethe amanqanaba aphezulu amafutha agcweleyo, afana nalawo afumaneka kumandongomane, anokunceda abantu banciphise ubunzima kwaye kuthintele nesifo sentliziyo. Iqulethe igenistein, isithako esinceda umzimba ukunciphisa amanqatha agciniweyo.
6. Iphucula impilo yeBongo
Amandongomane angaluncedo kwimpilo yakho yobuchopho ngenxa ye-vitamin E, zinc, magnesium, kunye ne-niacin equlethweyo. Banokuyiphucula inkumbulo yakho kunye namandla okuqonda, abalungele abantu abadala. Olunye uphando lubonisa ukuba luyanceda ekuthinteleni isifo se-Alzheimer's. Ke, ayikwenzi ukuba ube nobukrelekrele ngakumbi, kodwa ikwakhusela nengqondo yakho kwixesha elide. Kwaye kukutya okumnandi kootatomkhulu bakho!
Iibhiskithi zaBantwana, Iipakethi zesosi yeSoy, Umtya weHawthorn, Ikhukhi yeLadyfinger, Intonga yeBhontshisi entsha, Ukutya amandongomane anetyuwa,